गुराँसे क्रान्ति, पूर्वराजा र जनता
फेरि आज ज्ञानेन्द्र शाहका तस्बीर र खबर पढ्ने औसर प्राप्त भयो । राजगद्दी त्याग्न वाध्य भएपछि उनी केहि समय चुप लागेर नै बसेका थिए । सायद उनलाई लाग्यो पनि होला, जनताले राजा चुनेका हैनन् त्यसका कारण जनताहरु के भन्छन् उनले जनमत लिन चाहेनन् । सुरुक्क गद्दी त्यागी लुरुक्क नागार्जुन छाडेर गए । हुन त एक जमानामा आफ्ना पुर्खाहरुको बल र विवेकको प्रयोगबाट प्राप्त औसर थियो– राजगद्दी । तसर्थः आफूभन्दा शक्तिशाली शक्तिको उदयपछि उनले गद्दी त्याग्नुपर्ने प्राकृतिक पद्दती हो उनले सिकेको संस्कारमा । त्यसकारणः पनि अत्यन्तै लाचारीता पूर्वक उनले गद्दी त्याग्नु पर्‍यो । र, आजभोली हामीहरुले पत्रपत्रिकामा पढ्दै आएका ज्ञानेन्द्र शाहको नामका अगाडि एउटा उपमा अर्थात पूर्वराजा यसैको परिणती हो ।
मन्दिर र शक्तिपीठ डुल्ने आफ्नो सनातनको परम्परा अनुरुप ‘पूर्वराजा’ पनि मन्दिरहरु डुलेको हुनुपर्छ सायद । मन्दिर डुल्नुको पछाडि धार्मीक उद्देश्यबाहेक उनी अरु कुनै उद्देश्यले प्रेरित छन् भन्ने कुरो कम्तिमा पनि मलाई चाँहि विश्वास छैन । किनकी उनलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ, आफ्ना प्रत्येक राजकीय सम्बोधनको अन्तिम छ शब्दहरु ‘श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्’ बोलिरहँदा पनि पशुपतिनाथको अनुकम्पा रहेन । ५८ को जेष्ठ १९ को रातले प्रमाणित गरिसकेको छ – हरेक दुर्गन्धित षडयन्त्रका अगाडि ईश्वरीय प्रभाव निश्क्रियप्रायः रहन्छ । तथापी, मानिस लाचार छ । जवजव आफ्नो क्षमतामाथि मानिसलाई विश्वास लाग्दैन, ऊ भगवानको शरणमा पुग्दछ । सायद यहि मनोदशाको शिकार भएको हुनुपर्छ ज्ञानेन्द्र शाह । तर अचम्मको विषय यो छ कि उनी मन्दिरहरुमा भगवानको आशिर्वाद थाप्न हिडिरहेका बेला मानिसहरु उनलाई साक्षात विष्णुको अवतार मान्दै उनकै पछि लाम लागेको देखिन थालेको छ । त्यहाँ देखिने थुप्रै मानिसहरु ती पनि हुन जो गुराँशे क्रान्ति (६२/६३) को आन्दोलनताका सडकमा उर्लेर चिच्याइरहेका हुन्थे –“ज्ञाने चोर, देश छोड” । आज तिनै मानिसहरु सडकमा धनुष्टङ्कार आसनमा लामबद्ध भएर उस्तै स्वरमा नारा लगाउँदै छन् –“राजा आऊ, देश बचाऊ !”
गणतन्त्रको मीठो सपना देखाएर नेताहरुले हामीलाई भूलभूलैयामा पारे । पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमले यहि कुराको पुष्टि गरेका छन् । हामी जति नै अविश्वास गरौं – जनताहरुको मनोविज्ञान परिवर्तन भैरहेको छ । नेताहरु राजनेतामा परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन् । वा, उनीहरुलाई राजनेता बन्नु नै छैन । उनीहरु फगत हामीहरुलाई मीठा आश्वासन बाँडिरहेछन्, र हामीले पछिल्ला केहि वर्षदेखि उनीहरुलाई पत्याउँदै आईरहेका पनि छौं । उनीहरुले भने – संविधानसभाले जनताको सार्वभौमताको सुनिश्चित गर्दछ । संविधानसभाले जनताको सर्वोच्चता कायम गर्दछ । परन्तु, इमान्दारीताका साथ भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा हामीले कहिल्यै भोग्नु नपरेको कठिन दिनहरु अहिले भोगिरहेछौं । नेताहरु आफूआफूमै विश्वासको वातावरण कायम गर्न सकिरहेका छैनन् । जनताको सर्वोच्चताको कुरा गर्दै उनीहरु आफू र आफू इतरका मानिसहरुको सर्वोच्चता स्थापनाका लागि कम्मर कसेर लागेका छन् । हिजो एउटाको निरङ्कुश शासन ब्यवस्थाका लागि लडेका र लड्न प्रेरित गरेकाहरुले आज जब आफ्नै निरङ्कुशता लाद्नका लागि जुन छिनाझप्टीमा लागेका छन् त्यसले जनताहरुलाई सशंकित बन्न प्रेरित गरेको छ । आम नागरिकहरुलाई लाग्न थालेको छ, यी छोटे राजाहरुले देशको मुहार फेर्न सक्दैनन् । बस्तीहरुमा गाँइगुँइ सुनिन लागेको छ, अब जंगलमा धेरै सिंहहरुको एकैपटक राज चल्न असम्भव छ । परिणामतः जो हिजो जसका बिरुद्ध गगनभेदी नारा लगाउँदै सडकमा उर्लेका थिए आज उनै सडकमा जयजयकार गर्न लाम लागेका छन् किन ?
मेरो बुझाई यो हो कि, समय निकै घर्किसकेको छ । अब शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने वा पुनः राजतन्त्रमा जाने ? यसको फैसला सडकबाट नहोला भन्न सकिदैन । डेट एक्सापायर्ड नेताहरुले एउटा इतिहासलाई मनन गरुन – कम्बोडियामा राजगद्दीबाट गलत्याइएका राजा सिंहानुकलाई जनताहरुले फेरि गद्दीमा पुर्‍याएका थिए ! संसारमा सबभन्दा ठूलो शक्ति केहि छ त त्यो जनता हो ! नेता हैन !
I am in favor of change because this current statuesque of Nepali politics is appalling but sir, you and I cannot get rid of this chaos imposing the accuses on the present political actor...if we cannot do so then accusing is in vain.And moreover we the younger generations are loud and revolutionary only in Facebook, Newspaper articles and talkies of teashops...it is our sheer ignorance that is resulting this statuesque in Nepalese political scenario...it is all because you and I are not acting asacitizens...and advocating of reinstatement of monarchy is regressive, skeptic and ridiculous as the same time.
हजुर कुरा मुनासिव छ शैलेशजी, परन्तु फेसबुक, खवरपत्रिका र चियापसलमा गफ गर्नमा मात्र सिमित छौ‌ हामी युवा भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन । मलार्इ लागेको के हो भने, हामी युवाहरूले कुरा मात्र काटेर हुँदैन केहि चाँहि गर्नुपर्छ तर त्यो केहि चाँहि राजनीति वा आन्दोलनमात्र हुन सक्दैन ।सामाजिक सेवाका क्षेत्र वा अन्य केहिमा पनि हामी आफ्नो अह्म भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छौं र त्यसमा एक युवाको नाताले मेरो भरमग्दुर प्रयास रहिरहनेछ । साथै नेताहरूले सृजना गरेको यो परिस्थतिले भोली दिने परिणामका बारेमा आफूलार्इ लागेको कुरो ब्यक्त् मात्र गरेको हुँ । :)
Shiva Sasmit said…
"बस्तीहरुमा गाँइगुँइ सुनिन लागेको छ, अब जंगलमा धेरै सिंहहरुको एकैपटक राज चल्न असम्भव छ ।"
एकदम जायज कुरा । देशले उदार अधिनायकवादी व्यवस्था पो खोजेको हो कि ?